Akwụkwọ Tim Krozek na Martech Zone |
Edemede site na Tim Krozek
Tim Krozek bụ onye isi nke Mbo mbuli, na-eduga ahịa mgbasa ozi dijitalụ okike.
Tupu Inye Mgbasa Ozi, Krozek bụ onye na-ahụ maka Ego zuru ezu Frontier na-enweta ụwa na mbọ ndị ahịa na-enweta. O nyeere aka mee ka ndị ọrụ 15 mbụ bụrụ ndị ọrụ 220 na ihe karịrị $ 40 nde na ego ha nwetara. O doro anya na Frontier ga-enweta Adobe (NASDAQ: ADBE). Ọ gbakwara ahịa azụmaahịa Support.com na mmepe azụmaahịa, njikwa mmemme na ọrụ ndị ahịa. O mechara jisie ike mbọ ego Flite.com na-enweta maka akara aka ya, ụlọ ọrụ ya na ndị mbipụta akwụkwọ.